QM oo dalbanaysa in cadaaladda la horkeeno cidda saxafiyiinta Soomaaliyeed disha
Agaasimaha guud ee hay’adda Q.M u qaabilsan dhinaca waxbarashada ee UNESCO haweenayda la yiraahdo, Irina Bokova oo saxaafadda la hadashay ayaa ka dalbatay maamulada Soomaaliya oo ay ugu horeyso dawlada KMG ee Soomaaliya inay ka shaqeeyaan sidii cadaaladda loo hor keeni shaqsiyaadka ka dambeeya dilalka Soomaaliya loogu geysto wariyaasha Soomaaliyeed.
Irina Bokova waxaa ay hadalkeeda ku sheegtay in saxafiyiinta Soomaaliyeed ay yihiin isha laga helo wararka sugan ee Soomaaliya waxaana ay dalbanaysaa in deg deg baaritaano loogu sameeyo cidda ka dambeysa dilalka wariyaasha oo uu ugu dambeeyay dilkii bilawgii bishaan magaalada Gaalkacyo loogu geystay Allaha u Naxariistee Farxaan Jeemis C/lle oo u shaqeynayay Idaacadda Daljir qeybteeda G/kacyo.
“Dadaal kasta oo lagu heli karo cidda ka dambeysa dilalka wariyaasha waan ka qeyb qaadanaynaa muhiimaduse waxay tahay in la helo cidda ay saxafiyiinu bar tilmaameedka u yihiin” ayay agaasimaha guud ee hay’adda UNESCO Irina Bokova oo intaa ku dartay inay aad uga naxday dilalal wariyaasha Soomaaliyeed loo gaystay.
“Saxafiyiintu waa kuwa u hadla dadka aan codka laheyn marka waa in la bad baadshaa cid kasta oo waxyeelaysana laga qabtaa waana inay u shaqeeyaan si madax banana iyagoo aan wax cabsi ah dareemeyn” ayay sidoo kale tiri haweenayda madaxda ka ah laanta Q,M u qaabilsan dhinaca waxbarashada ee UNESCO.
Lixdii bilood ee lasoo dhaafay Soomaaliya waxaa lagu dilay illaa iyo 6 wariye kuwa kalena lagu dhaawacay, Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada lagu bartilaameysto saxafiyiinta warbaahinta madaxa banaan ka shaqeeya.